झापामा डेंगु सङ्क्रमित बिरामी फेला – Light Nepal
June 12, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on झापामा डेंगु सङ्क्रमित बिरामी फेला
झापा, २९ जेठ । झापामा डेंगु सङ्क्रमित बिरामी फेला परेका छन् । बिर्तामोड, अर्जुनधारा, भद्रपुर र दमक नगरपालिकामा छ जना डेंगु सङ्क्रमित बिरामी फेला परेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
बिर्तामोडस्थित पूर्ण टुङ्ग विर्ता सिटी अस्पतालमा छ जना डेंगु सङ्क्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको र तीमध्ये तीन जना झापाका डेंगु सङ्क्रमित बिरामी रहेको अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा अनिल बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । डा बस्नेतका अनुसार बिर्तामोड नगरपालिकाका दुई र अर्जुनधारा नगरपालिकाका एक जनासहित धरानका तीन जना डेंगु सङ्क्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
भद्रपुर नगरपालिकामा समेत एक जना डेंगु सङ्क्रमित रोगी फेला परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भद्रपुरका अधिकृत कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । दमकमा समेत दुई जना डेंगु रोग सङ्क्रमित बिरामी फेला परेको दमक अस्पतालले जनाएको छ ।
डेंगुको सङ्क्रमणका कारण गत वर्ष झापामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । दुई हजारबढीमा यो रेगको सङ्क्रमण देखिएको रोगलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा ल्याउन निकै समय लागेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
एमाले बैठक आज पनि : ओली, नेपाल, खनाल र गौतमको कडा आलोचना
September 23, 2016 September 23, 2016 लाइट नेपाल
कति छ आज सुनको मुल्य ?
July 19, 2018 लाइट नेपाल
चिया पसलमा सांसदलाई व्यंग्यः सरकारले भुस्याहा कुकुरका मालिकलाई पनि कर असुल्छ !
August 14, 2018 लाइट नेपाल